သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံသို့ သမ္မတရုံးဝဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့် ပေးပို့ခဲ့ပြီးသော အိတ်ဖွင့်ပေးစာ | Ko Rohingya
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှ စတင်၍ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် အချို့ဒေသများတွင် အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ မုစ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေး စာရွက်စာတမ်း၊ လက်ကမ်းကြေညာ စာရွက်များ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိနေခဲ့ကြခြင်း၊ ဥပဒေဆန်ဆန် အမိန့်ကြေညာစာများ ထုတ်ပြန်နေခဲ့ ကြခြင်း၊ အချို့မီဒီယာများဌာနများမှ မသုံးနှုန်းထိုက်သည့် အသုံးအနှုန်းများကို သုံးနှုန်းနေခြင်းနှင့် မခိုင်လုံသော သတင်းများကို ထည့် သွင်းဖော်ပြနေကြခြင်း၊ တရားဓမ္မပွဲများ၌ မိမိသက်ဝင်ယုံကြည်ရာ ဘာသာတရားနှင့် အလျဉ်း မသက်ဆိုင်သည့် အစ္စလာမ့်ဆန့်ကျင်ရေး၊ မုစ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေးစကားများကို တရားသဏ္ဍာန်ဖြင့် ဟောပြော ပို့ချနေခြင်းတို့ကို ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် လေ့ လာ တွေ့ရှိရပေသည်။ ထိုသို့ အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးများ ဆောင်ရွက်နေခြင်းသည် သက်ဝင်ယုံကြည်မှု ဘာသာတရား ကွဲပြား ခြား နားသော ပြည်သူများအကြား အမုန်းတရားများကို ဖြစ်ထွန်းလာစေ၍ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် မုန်းတီးခြင်း၊ ရန်မူခြင်း၊ စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်း များ ပေါ်ပေါ်လာရန် အကြောင်းတရားများကို ဖန်တီးနေကြပေသည်။ ထိုကဲ့သို့သော လုပ်ရပ်များသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ၏ အောက်ဖော်ပြပါ ဥပဒေနှင့်လည်း ဆန့်ကျင်နေပေသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မကြီး၊ ၃၆၄ တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ “ထို့ပြင် လူမျိုးရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း တစ်ဖက် နှင့်တစ်ဖက်၊ တစ်ဂိုဏ်းနှင့်တစ်ဂိုဏ်း မုန်းတီးခြင်း၊ ရန်မူခြင်း၊ စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်း တစ်မျိုး မျိုး ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ရည်ရွယ်သော သို့မဟုတ် ပေါ်ပေါက်လာရန်အကြောင်းရှိသော အပြုအမူသည် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည်။ ထိုအပြုအမူမျိုးအတွက် ပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်ရန် ဥပဒေ ပြဌာန်းနိုင်သည်။”
သို့သော် အထက်ဖော်ပြပါ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်၍ ထိုသို့သောလုပ်ရပ်များကို ဆောင် ရွက်နေသောသူများအား အောက်ခြေရှိ အုပ်ချုပ်သူ အာဏာပိုင်များအနေနှင့် ထိရောက်စွာ အရေးယူခြင်းမပြုပဲ မသိကျိုး ကျွန်ပြု ၍ နေကြပေသည်။ သို့ပါ၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ယင်းပြဌာန်းချက်နှင့် အခြားတည်ဆဲဥပဒေများကို ချိုးဖောက်နေ ကြသော သူများအားလုံးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးပါရန် ကျွန်ုပ်တို့ အစည်းအရုံးမှ သမ္မတကြီးအား တိုက် ရိုက် လေးလေးနက်နက် တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ ထို့ပြင် ယခုကဲ့သို့ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများ၏အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်၊ ဂုဏ်သိက္ခာများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေမည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအကြား ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်၍ အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာ့မုစ်လင်မ်လူထုကြီး တစ်ရပ်လုံးမှ ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အစည်းအရုံးမှ လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်တွင် တစ်ကြိမ်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာသာဝင်များနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအကြား ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်၍ အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေခြင်း ကို ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေညာ ချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့ ကန့်ကွက်ခဲ့သော်လည်း အစိုးရအာဏာပိုင်များမှ မည်သို့မျှ ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့၍ ယခု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံသို့ လေးလေးနက်နက် စာရေးသား၍ တောင်းဆိုရခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ပါ၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်း စိန်နှင့်တကွ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းရှိ အာဏာပိုင် အကြီးအကဲများအနေနှင့် ယင်းကဲ့သို့ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းများ ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဖန်တီးနေသည့် ရာဇ၀တ်မှုများကို ကျူးလွန်နေကြသောသူများကို ကျောသားရင်သား မခွဲခြားပဲ ပြင်းထန်စွာ ထိထိရောက်ရောက် တရားဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူပေးပါရန် မြန်မာ့မုစ်လင်မ်လူထုတစ်ရပ်လုံး၏ ကိုယ်စား ကျွန်ုပ်တို့မှ ထပ်မံ၍ လေးလေးနက်နက် တောင်း ဆိုလိုက်သည်။ အကယ်၍ သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရအာဏာပိုင်များမှ အထက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း ဖန်တီးနေကြသည့် တရားခံများအား ဥပဒေအရ ထိထိရောက်ရောက်၊ လျှင်လျှင်မြန်မြန် ဖော်ထုတ်၍ အရေးမယူ ခဲ့ခြင်းကြောင့် အနာဂတ်တွင် ရာဇ၀တ်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်များ၊ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းများအတွက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ၎င်း၏အစိုးရအာဏာပိုင်တို့၏ တာဝန်သာလျှင်ဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါသည်။
This entry was posted on February 6, 2013, in စိန်ခေါ်မှုများ, Burmese Muslim Youths For Human Rights And Justice and tagged စစ်အာဏာရှင်, ဓာတုသိန်းစိန်, ဘာသာရေး, ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း, သမ္မတ, အကြမ်းဖက်သမား, ဦးခင်ရီ, ဦးသိန်းစိန်, မြန်မာ, Burmese Muslim Youths For Human Rights And Justice. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အထောက်အထားများ (RNDP @ Aye Mg)	၀မ်းနည်းမနေနဲ့ →